Maydhashada Orionid Meteor, oo ka mid ah kuwa ugu quruxda badan sanadka | Saadaasha Shabakadda
Orionid meteor shower, mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan sanadka
Casudi casals | | Kala bixid, Saadaasha hawada
Mid ka mid ah qubeyska meteor-ka ugu quruxda badan oo sanad walba dhaca ayaa timid, Orionids-ka. Maaha mid ka mid ah kuwa ugu badan "meteor" ee soo dhaca, laakiin waa mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan. Iyadoo la tixgelinayo in Bill Cooke, oo madax ka ah NASA ee Xafiiska Meteorites, uu xaqiijinayo, muxuu ugu seegi doonaa fursaddan inuu ka fikiro?
Orionids waxay bilaabeen inay yeeshaan aragti fiican afar maalmood kahor, laakiin Habeenkii apogee ugu badnaan waa maalinta berri oo Sabti ah 21 illaa Axad 22. Sannadkan sidoo kale wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo Dayaxu uu dhinac naga jiro, xalay wuxuu sameeyay Dayaxdiisa Cusub. Muuqaalka munaasabaddan ayaa xitaa ka fiicnaan doonta sida caadiga ah, marka laga reebo in daruuro aysan sameysmin, iyo dabcan, inaga fogeynta wasakheynta iftiinka. Hadday sidaas tahay, bandhiggu waa caymis.
Dulmar guud oo ku saabsan asalka Orionids
Orionids, waxay ka yimaadeen Halley's Comet. Iyagu waa hadhaagii miisaanka meertada ah ee qorraxda ku wareega 76-kii sanoba marna ugu dambaysay 1986. Waxay muuqdaan mar kasta oo meeraheennu ka gudbo aagga laga helo hadhaagaas dabada ah ee Halley's Comet. Waxaad runtii bilaabi kartaa inaad aragto qaar ka mid ah Oktoobar 2, waxayna dhammaataa Nofeembar 7. Waxay sidoo kale ka muuqdaan meel kasta oo adduunka ka mid ah, maxaa yeelay waxay aad ugu dhow yihiin dhul-badeedka samada.
Qiyaasta meteorites ee la arki doono waxay noqon doontaa qiyaastii 23 saacaddii, oo waxay aadayaan a xawaaraha qiyaasta ah ee kiiloomitir 66 kiiba. Meesha halka loo fiirsado waxay u jeeddaa xiddigta Orion, ilaa xad bicharraco aad u weyn! Taasi waa sababta loogu yeero sidaas, maxaa yeelay waxay u muuqdaan inay ka yimaadeen xiddigtaas. Dabcanna, xusuusnow inaad fiiriso cirka adigoon haysan nooc qalab ah, sida telescopes ama binoculars. Halkan waxa muhiimka ah waa in la daboolo qaybta muuqaalka ugu ballaaran ee suurtogalka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Orionid meteor shower, mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan sanadka
Miyaynu u socon karnaa sannadka kulul?
Duufaanta Lan ayaa ku sii socota Japan